Ogaden News Agency (ONA) – Maka Gadmaysaa Mucaaradka iyo Caalamkaba Ujeedada Shirka Qawmiyadaha ee Jigjiga – By Gumaysidiid
Maka Gadmaysaa Mucaaradka iyo Caalamkaba Ujeedada Shirka Qawmiyadaha ee Jigjiga – By Gumaysidiid
Posted by ONA Admin	/ December 3, 2013
Caadada gumaysigu waxay ku dureersatay in shucuubta la gumaysto marwalba loo keeno wax maskaxdooda mashquuliya. Si looga ilaaliyo in wuxuu la doonayo gumaysigu ka faaruqdo dadka maskaxdooda. Hadafka uu ka leeyahayna waxaa lagu soo ururin karaa cinwaanka ah – Mashquuli si aanay kuugu tashan-.
Gumaysiga haysta Ogaadeeniya kama faaruqo kolba in wax cusub lagu arko. Ujeedaduna waa in shacabka S.Ogadenya oo waligoodba diidaana gumaysigiisa oo waran iyo xabad la hortaagnaa loo helo fursado uu ku banaysto Dhulkooda oo lagu qanciyo in laga adkaaday oo loo taliyo iyo in qof walba si aan dookhiisa ahayn uu ku qaadato wax walba oo loo keeno. Cidii iskudayda in ay ka biyo diidana lagu ogolaysiiyo Xabsi, Kufsi, Dil iyo hagardaamo loo gaysto isaga iyo reerkiisaba.
Nadaamkan ka taliya Itobiya ee hada gumaysta Ogaadeeniya ee EPRDF/TPLF, wuxuu ku soo tijaabiyay dalka iyo dadka nidaamyo kala duwan, oo isku hadaf ah. Laakiin kala siiqo ah. 1992 dadweynaha Ogaadeeniya waxaa lagu maaweelin jiray wax afka lagaa dhaho, oon uurka jirin. Sida in lagu dhaqi doono Sinaan iyo Cadaalad inta xukunka kala-guurka ah uu socdo ka dibna ay ka tashan doonaan aayahooda. Balantii lawada galay waxaa diiday oo lasoo marin waayay nadaamkii jiray. In sinaanta iyo cadaaladu shaqayso oo sida heshiisku ahaa qawmiyad walba aayaheeda ka tashato waxay noqotay warqad ay saxarada isaga tireen (waa hadday iska tiraane) Wayaanihii dalka qabsaday.
1994. Waxaa bilaabatay Gacan qaad iyo Qaybin. Ruuxii shacab ah in la dhoho adigu danbi ma qabtid waxna lagu yeeli maayo. Hasa ahaatee Siyaasiinta iyo Waxgaradka iyo Horgalkii bulshada la ugaadhsado. Waxaana kuu cadayn kara, Xafiisyada Xisbiyada iyo Banaan baxa shacabka lama diidi jirin. Lakiin Siyaasiinta waa la layn jiray.
Isku soo ururiyoo, halgankii lala galay kooxda ka talisa Itobiya maraaxil ayuu maray. Nadaamkii EPRDF ee TPLF dhisatay dhamaan shucuubaha hoosjooga way ka horyimaadeen. Waxaana xusid mudan 2005kii doorashadii ahayd ee dhagar qabe Malese Zinawi uu ku xasuuqay dadkii ka gadooday boobka codkooda iyo tii 2010 ee waji gabuxu karaacay TPLF markay wada qaateen kuraastii, ee aduunkuna canbaareeyay. Ka dib waxaa bilaabatay oo welina socda kacdoonka ladoonayo in nidaamkan qalafsan booska uu kaga baxo. Mucaaradku wuxuu ka midaysan yahay tuurista EPRDF/TPLF waxaase lagu kala duwanaa hadafka fog.
Sikastaba ha ahaatee markay xukuumadda EPRDF/TPLF hadheeyeen culaysyadii faraha badnaa, gaar ahaan dagaalka ay ku wiiqmeen ee ka socda Ogadenya ayay qorsheeyeen inay helaan irid ay mashaakilka kaga baxaan. Waxay bilaabeen riwaayadihii aynu ogayn ee heshiis ayaan la galnay Ibraahim Dheere iyo Salaaxudiin. Markay waxba u soo kordhin waayeena waxay ogolaadeen wadahadal in lagalay ONLF. Maxaase ka dhashay? Waxaa ka dhashay go’aankii dhiiranaa ee ONLF.? Markii la fahmay ujeedooda.
Maxaa hadda keenay in shir qawmiyadaha Itobiya Jigjiga lagu qabto? Dhab waxaa ah gumaysigu wuxuu maantana daydayayaa irid uu kaga baxo mashaakilka haysta. Ka dib markii qawmiyadaha qaarkood ay ku go’aansadeen inay hubka qaataan sida shacabka Ogadenya hubka u qaatay, maadaama kooxda TPLF ay cadeeyeen in aanay diyaar u ahayn waxaan ahayn xoog inuu ka shaqeeyo Itobiya.
Hadaba qorshaha ugu horeeya waa in mucaaradka lagu qanciyo ONLF waan soo afjarnay 20 sano ka dib ee isdajiya, haddii kale wadada aan marinay ONLF ayaad mareysaan. Shirka loogu yeedhay qawmiyadaha ee Jigjiga ayaana la doonayaa in daliil looga dhigo arintaa. Sababtaa daraadeed ayayna dhawaan Ogaadeeniya meelo kamid ah socdaalo ugu mareen wafdi ka socda EPRDF/TPLF waxayna ugu warbixiyeen shacabka Itobiya inay soo mareen meel walba. Inkastoo mudda yar ka dibba la ogaaday inuu socdaalku ahaa socdaal Kaamera iyo sawirqaad.
Si loo khaldo shacabka ayaa wax yar kadib layidhi shirkii sanadlaha ahaa ee qawmiyadaha Jigjiga ayaa lagu qaban.
Mala odhan karaa xukuumadda Itobiya ma ogsoona xaaladda dhabta ah ee Ogadenya? Jawaabta waa Maya. Sababtoo ah magaaladii Jigjiga ee la rabay inay ka muuqdaan jawi dabaadag iyo farxad waxaa laga dhigay xero ciidan oo dhanwalba ka oodan. Dhamaan shaqaalihii dalka, ardaydii iyo macalimiintii, habrihii iyo odayaashii midna lagama reebin, waxaana la yidhi waardiye ka qabta jidadka iyo hareeraha magaalada. Aaway nabadgalyadii ka jirtay Ogadenya? Aaway ONLF waan ka sifaynay dalka ee soo arka? Laba daran mid dooro ayay ku noqotay Jeneada ka taliya Ogadenya iyo kooxda ay ku shaqaystaan ee Cabdi iley. Inay u rogaan Jigjiga Xera oodan oon la soo gali karin lagana bixi karin iyo inay khamaaraan oo ka dhigaan Jigjiga magaalo dabaadagaysa ka dibna wixii ka dhaca ay dusha u ritaan. Waxaad moodaa inay doorteen midka hore.
Hadaba ujeedadii ahayd in mucaaradka siyaasadeed ee doonaya in qori afkii wax ku doontaan laga gado sheeko ah 20 sano qorigii dhacayay ayaa dhamaaday si caajis loogu beero ma u hirgalayaa? Aan dhowrno.